Qaramada Midoobay Iyo Qabsashadi Qaranka Colombia? – somalilandtoday.com
(SLT-Combodia)-1990-yadi beesha caalamka ayaa waxay howlgalki nabadeed ee qaramada midoobay ay fuliso oo ugu dheeraa ay ka billaabeen dalka Combodia ee ay dagaallada hareeyeen si dimuqraadiyad waarta looga soo dabbaalo.
25 sana kaddib, Hun Sen, oo ah ninka talada dalka qabtay kaddib marki ay qaramada midoobay dalkaasi yimaaddeen, wuxuuna u xil saaran yahay meel marinta doorasha aan loo dhammeyn oo ka dhacda dalka Combodia oo soo afjarta dagaalladi dabada dheeraa ee dalkaasi ka dhcay.
Wuxuuna fahmayaa qiimaha uu codka xorta ah uu leeyahay. Wakhtigiisa ugu badnaa waxaa uu ku qaatay ka shaqeynta arrima la xidhiidho u samafalka carruurta xilligi uu dalka ka talinayey kaligii taliyaha khmer Rouge regime, oo mudda afar sana ah dhiig badan ku daadiyey oo dilay in ka badan laba milyan oo qof ay ku naf waayeen oo ay dadki dhintay uu ka mid ahaa aabbihi isaga dhalay.
1992-ki, mar uu marayey gabagabada waxbarashada dugsigiisa sare, waxaa dalka Cambodia soo gaaray ciidama koofiyadda Buluugga xiran oo ka socda qaramada midoobay. Wuxuu billaabay inuu la shaqeeyo ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay isaga oo adeegsanaya luuqaddiisa Ingiriisiga ee jajaban isaga oo si gaar ah ula shaqeeynayey sargaal ka socday dalka India, wuxuuna qoyska sargaalka uu suuqa ku yaallo dhulka miyiga ee gobolka Veng uga soo iibinayey wixi ay u baahdaan oo dhan.
Wuxuu yiri “waa marki ugu horreysay noolasheyda oo aan qof ajnabi ah Af-ingisriisi kula hadlo”. Wuxuuna i weydiiyey “ma dooneysaa inaad u shaqeyso dowladda ku meel gaarka ah ee dalka cambodia ee ay sameysay qaramada midoobay?”
In ka badan 20,000 oo askari, boolis iyo shaqsiyaad kale oo waddama kala duwan u dhashay ayaa Cambodia ka cararay, iyada oo dalka Cambodia uu dunida inteeda kale uu ka go’doomay laga billaabo 1975-ki. Waxaa caalamka ka kala yimid xoogag ka socda qaramada midoobay si aan horay loo arag, waxayna gacanta ku dhageen maamulka waddan madaxbannaan oo xor ah waxayna qaramada midoobay diyaariyeen iney doorashada heer qaran ah ay ka dhacdo dalkaasi.
Ujeeddadooda sida oo kale wuxuu ahaa iney kooxaha ku dagaallamayaa dalka Combodia ay ka dhex abuuraan xabbad joojin, in hubka laga dhigo iyo in kumannaanka qoxootiga ah ee dalka Cambodia u dhashay ee ku sugan xerada qoxootiga ee ku taallo xudduudda Thai.
Lahaanshaha sawirkaPETER CHARLESWORTH/GETTY IMAGESImage captionQaramada midoobay waxay ku guul darreysteen iney kooxaha ka dagaallamo Combodia ay hubka ka dhigaan
Tobannaan milyan oo doolar ayaa lagu shubay waddankan dunida ugu saboolsan, sicir bararka dalkaasi ayaa cirka isku shareeray. Kiumannaan haweenka dalkaa ayaa galaya iney jirkooda ka ganacsadaan kaddib marki ay ciidamada nabad ilaalinta qaramadada midoobay ay dalkaasi yimaaddeen, cudurka HIV/AIDS-ka ayaa dalkaa si la yaab leh ugu faafay.
Dhinaca kalana, imaashaha qaramada midoobay ee dalka Combodia waxay abuurtay kumannaan fursado shaqo iyo ganacsiyo ay sameeysteen shacabka reer Combodia iyo saraakiisha musuqa lacagaha ay ku heleen ku howl galay.
Sophorn waxaa loo tababaray inuu noqdo shaqaale diiwaan gelinta codbixiyeyaasha ka howl gala. Wuxuu safarra ku aadaa deegaanno kala duwan isaga oo deegaannadaasi gaarsiineysa xog la xidhiidha iney doorashada dalaka laga qabanayo shacabkuna ay doorashada codkooda ka dhiibtaan. Amiir Norodom Sihanouk oo ah boqor muusikada jaazka aad u jeclaa oo horayna boqor ugu soo ahaa dalkaasi, wuxuuna dalka uu dib ugu soo noqday musaafiris uu mudda badan uu dalka ugu maqnaa kaddib iyada oo dad badan oo dalka Combodia u dhashay ay ididiilo badan ku abuurtay iyaga oo aad u rajeeyey iney dalkooda nabaddi hore ku soo dabbaalanto.
Sophan wuxuu leeyahay “waxaan u maleynaya iney cid walba ku faraxsan tahay howl galka ciidamada nabad ilaalinta ee UNTAC sababta oo ah boqorkina wuu soo noqday cid walba waxay rajeeyneysaa inuu waddanku caadigiisa ku soo noqonayaa wanaaggiisi hore”.
Lahaanshaha sawirkaPETER CHARLESWORTH/GETTY IMAGESImage captionSaraakiisha UNTAC oo agabka doorashada shacabka u qaybinaya
Tim Carney oo ah madaxa qaybta isgaarsiinta iyo waxbarashada ee UNTAC ayaa wuxuu sheegayaa, “xafiiskiisu waxyaabaha uu xoogga saarayo ayaa waxaa ka mid ah inuu aasaaso idaacad madax bannaan oo uu dalka Combodia yeesho, inuu shacabka dalka uu aaaminsiiyo in codkooda si sir ah looga xafidayo. Arrintaasina ma aha wax shacabka ay yareysanayaan maadaamaa ay ku soo noolaayeen cadaadiski taliski dhiigya cabka ahaa ee Khmer Rouge, ee “shacabkiisa dilkooda u arkayey sida canaanaas la goosanaya”.
Mr Carney howlgalkiisa wuxuu u billaabay isaga oo aad u rajeynaya inuu dalku ku soo noqdo maamulki Khmer Rouge 00 1980-yadi oo dagaal kaga soo horjeestay oo dowladdi Vietnam ee Hun Sen dagaal kula jiray uuna doonayo inuu ka qayb qaato doorashadan ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay ee dalka ka dhaceyso.
1991-di waxay saxiixeen heshiiska iskaashiga ee Paris ee waddada u sallaxay howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee UNTAC. Heshiiskaas oo ahaa heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka sokeeye ee dalkaasi Combodia muddada ka socda ee u dhaxeeya xoogagga waaweyn ee kooxaha fallaagada hubka siiyo lacaga aan yareenna ku firdhiya xoogagga dalkaasi isaga soo horjeeda.
Dagaalki sokeeya markuu dhammaaday haddana waxaa billaawday loollan xoogagga dibadda ay u galayaan qabsashada siyaasadda Combodia, balse Mr Carney wuxuu diyaariyey barnaamij siyaasadeed looga magac daray “Siyaasadda ha lagu soo celiyo gacanta shacabka reer Combodia”.
hase yeeshee codbixinti doorashada waxaa qaadacay koox marki horaba dagaal hubeysan dalka ka wadday waxayna billaabeen weerarro ay ku beegsanayaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dslkaasi kusugan. Natiijada doorashada kaddibna waxaa dalka ka billaawday mudaharaadyo rabshada wata oo looga soo horjeeda natiijada doorashada oo uu hoggaaminayo xisbiga CPP uu hoggaaminayo Hun Sen. Ninkan oo soo hoggaaminayey dagaalki lala galay Vietnam ayaa waxay tillaabadan u noqotay mid uu ku tijaabinayo awooddiisa siyaasadeed oo uu tobaneeyo sano soo dhisayey.
Waxaan shaki ku jirin Hun Sen iyo ninka loo nisbeeyey inuu doorashada ku guuleystayba ay wax kastaba u hureen sidi ay kursigaasi ku heli lahaayeen.
Lahaanshaha sawirkaPAULA BRONSTEIN/LIAISON/GETTYImage captionQaramada midoobay oo ka shaqeyneyso qiimaha codka shacabka uu leeyahay
Xaaladda murugsan uu dalku ku jiray 1993, in ka badan afar malyan oo qof ayaa u soo dareeray codbixinta, iyaga aad ugu soo labbistay dharka ugu quruxsan una dul qaadanayey kuleylka cadceedda.
Mr Carney wuxuu yiri “waa munaasabad”, ugu dambeyntina waxaa doorashada codkooda ka dhiibtay 90% dadki cod bixinta iisu diiwaan geliyey, kaalinta ugu horreysana waxaa doorashada ka galay xisbiga boqortooyada la xidhiidha ee Funcinpec waxaana ku guuleystay wiil uu dhalay Amiir Sihanouk oo la yirahdo Norodom Ranariddh.
Dhacdooyinka waaweyn ee dalka Combodia
April 1975 – Kooxda fallaagada ee la magax baxday Khmer Rouge guerrillas ayaa waxay bilaawday dagaal ay kaga soo horjeeddo dowladda dalka ka dhisan uu Mareykanka garabka siiyo dalka qayba badan oo ka mid ahna wey qabsatay, ugu dambeyntina kooxdi fallaagada waxay la magax baxday Democratic Kampuchea.
January 1979 – Ciidamada Vietnam ayaa qabsaday caasimadda Phnom Penh kooxdi fallaagada oo waddanka laga qabsadayna waxay u carareen xuduudda dalka Combodia uu la leeyahay Thailand.
January 1985 – Hun Sen ayaa wuxuu ra’isal wasaare uu ka noqday dowladda ay dalka ka dhistay Vietnam.
October 1991 – Heshiiski nabadda ee Paris ayaa la saxiixay, heshiiskaas oo u gogol xaadhay howlagallada nabad ilaalinta qaramada midoobay iney si habsami leh u socdaan.
May 1993 – Waxaa marki ugu horreysay dalkaasi ka qabsoontay doorashadi si dimuqraadiyad ah u dhacda.
Lahaanshaha sawirkaSYGMA/GETTY/AFPImage captionHun Sen wuxuu xilka hayaa in ka badan 30 sano
Dowladda mudda dheer kaddib ka dhisantay dalkaasi ayaa noqotay mid ku tallaabsata tallaabbooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin nabadgalyo, kobac dhaqaale iyo doorashada si dimuqraadiyad ah u dhacda.
Tallaabbooyinka badanaa ay dowladdu ku dhaqaaqday waxay ahaayeen kuwa ay horay u billaawday qarmada midoobay ciidamadeeda nabad ilaalinta ee UNTAC oo ku sugan dalka Combodia.
Waxaana si weyn dolwadda looga cadaadiyey iney oggolaato sameynta ururrada bulshada rayadaka ah iyo iney u gogl xaadho saxaafadda xorta ah maadaamaa ay dalku ku soo fool leedahay doorashada 29-ka bisha june ka dhaceysay, midowga yurub iyo Mareykankana waa ay diideen iney doorashada ay taageera ka geystaan.
Dowladda waddanka ka dhisantay oo ay taageerto Shiinaha ayaa waxaa lagu tilmaamay mid caqaba ku noqoneyso iney shacabka Combodia ay codkooda ku kala saaraan 20-ka Xisbi ee doorashada u loollameyso. Hase yeeshee natiijada doorashada ee soo baxday ayaa waxay noqotay inuu xisbiga CPP uu doorashada gabi ahaanba uu ku guuleystay xisbiyada mucaaradkana ay doorashadaasi wax cod ah ka helin.
“25 sana kaddib waxaa dhammaan qaybaha kala duduwan ee dalkaasi ka muuqda miraha dimuqraadiyadda ay dhalisay, balse dimuqraadiyadda maanta ww wadahadal ayuu leeyahay Hun Sen isaga oo guud ahaan talada dalka la wareegay.
Mu Sochua, oo ah ku xigeenka xisbiga CNRP ayaa waxay leedahay “Heshiiska nabadda ee PAris ayaa wuxuu ahaa in doorashada la farageliyo si ay cadcaddaan ugu dhacdo balse dhibku waxay ka timid ayey tidhi “beesha caalamka ineysan siyaasadda Combodia marnaba faraha kala bixin.”
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionSanadka 2013-ka ololihi doorashada ee xisbiga mucaaradka
Barafassor Sophal Ear, oo wax ka dhiga Kulliyadda Occidental ee ku taalla magaalada Los Angeles wuxuu leeyahay rajada laga qabay in dimuqraadiyad lagu soo dabbaalo Combodia gebi ahaan ma dhimatay? “maya waa ineynu ku faannaa 25-ki sano ciidamada nabad ilaalinta nafta ay u hureen UNTAC meel cidla ah kuma nicin waayo Hun Sen wuxuu helay waxa uu doonayey sanaddi 1993, mudda 25 sana ahna taa ayuu sugayey.”
Sophorn oo doorasha walba oo dhacda codkiisa ka dhiibanayey laga soo billaabo 1993, wuxuu leeyahay hadda waa la saadaalin karaa cod bixinta doorashada.
Xisbiga CPP, waxaa lagu tilmaamay “qof keligii dagaallamaya, keligiina dhacaya”